Mkpesa # 1 Banyere Inbound Marketing | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 15, 2016 Fraịde, Jenụwarị 15, 2016 Douglas Karr
Otu ugboro kwa ọnwa ma ọ bụ karịa, anyị na-anụ otu mkpesa ahụ site na atụmanya ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ahịa na ndị ahịa na-eso anyị arụ ọrụ inbound marketing mgbalị. Ghara ikwu na mkpesa a bụ nke m ga - eme ka mụ na ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụrụ na aghọtaghị m etu esi abanye ahịa na - arụ ọrụ.
Mkpesa: Anyị anaghị enweta azụmaahịa ọ bụla na weebụsaịtị anyị.
Enwere ezigbo nsogbu na ụlọ ọrụ azụmaahịa inbound ka esi kọwaa ya na etu esi abanye ahịa n'ezie ọrụ. Echiche nke ịtọlite ​​nnabata web ga-eme ka weebụsaịtị gị bụrụ igwe ebe atụmanya ga-achọta gị na nyocha ma ọ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, gụọ ihe onwunwe gị, wee mejupụta ụdị na weebụsaịtị gị abụghị eziokwu. Ọ bụ ụdị nke otú o si arụ ọrụ, mana imerime azụmaahịa anaghị aga n'okporo ụzọ a.
Àgwà Na-atụ Anya Ya
Ka anyị tụlee ịzụ omume, nke mbụ. Anyị dere banyere obere oge na njem ndị ahịa tupu m agba gị ume ka ị gụọ post. Nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ anaghị achọta gị na nsonaazụ ọchụchọ, gaa na peeji nke ụlọ gị, wee zụta ọrụ gị na ịdị mfe ahụ. N'ezie, data Cisco nyere na-egosi na nkezi azụmahịa nwere karịrị 800 iche njem (biko gụọ ebook anyị dere na nke a).
Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ (dị ka ụlọ ọrụ anyị), lee otu njem njem ịzụta na-arụkarị:
Okwu Ọnụ - onye ahịa na - ekwukarị anyị na onye ọrụ ibe ha mgbe ha na - achọ enyemaka anyị nwere ike inye.
search - olile anya na-enyocha ntanetị maka azụmahịa gị ma chọta ebe nrụọrụ weebụ gị na mmekọrịta.
Weebụsaịtị - olile anya ahụ na-eleta weebụsaịtị anyị. Ha na-elele ụdị ọrụ anyị nwere, akụrụngwa nwere ike inyere ha aka ịme mkpebi, otu ha na ya ga-arụ ọrụ, yana asambodo ma ọ bụ ndị ahịa anyị rụburu ọrụ.
content - olile anya na-agụ ọdịnaya gị ma nwedịrị ike ibudata ma ọ bụ rịọ ozi ndị ọzọ.
soro - na olile anya ahụ mgbe ụfọdụ na - ejikọ anyị na mmekọrịta mmadụ na ibe, hụ ụdị ọrụ anyị na - arụ, jụọ ndị mmadụ na netwọkụ anyị otu anyị ga - esi rụọ ọrụ yana ma anyị nwere ike ijikwa nsogbu ha ma ọ bụ na anyị agaghị.
Idenye aha - ọtụtụ oge olile anya adịghị n'ọnọdụ ịzụta, mana ha na-eme nyocha, yabụ na ha debanyere aha na akwụkwọ akụkọ gị iji nọgide na-akpọtụrụ ma nweta ndụmọdụ bara uru.
zuko - olile-anya ahụ na-ejikọ anyị site na Okwu Ọnụ njikọ iji nweta mmeghe nkeonwe. Anyị gachaa nzukọ, ha na-ekpebi ma ha tụkwasịrị anyị obi ma ọ bụ na ha atụkwasịghị anyị obi ma anyị amalite azụmahịa.
Ma ọ bụ Kpọtụrụ - mgbe ụfọdụ olile anya na-akpọtụrụ anyị ozugbo site na email ma ọ bụ ekwentị iji hazie nzukọ anyị.
Nyere usoro ahụ, ị ​​hụrụ ebe inbound marketing adaba na ihe o na-enye ahia gi? Nke ahụ bụ ihe dị iche iche dị iche iche karịa ihe ntanetị na-abanyekarị n'ịntanetị, nke bụ:
search - maka isiokwu ma chọpụta ebe nrụọrụ gị.
download - denye aha ma budata nnochi anya.
nso - nweta nkwanye ma banye.
Ahịa inbound ROI
N'iburu ụdị omume a dị iche iche, ị nwere ike ịhụ etu o siri sie ike ịkọ ahịa azụmaahịa gị maka atụmatụ ahịa na ahịa gị niile? Ọ bụrụ na ị nwere otu ndị na-ere ahịa na-apụ apụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ire ọ bụla ka enyere ndị otu ahụ aka - ọkachasị ma ọ bụrụ na ha enwegoro ma na-azụlite mmekọrịta na atụmanya ịchọrọ ịme azụmahịa.
Ajụjụ maka inbound marketing kwesịrị ịgụnye:
Mgbe ị mechiri atụmanya, ha mere gaa na saịtị gị n'usoro ire ahia?
Mgbe ị mechiri atụmanya, ha mere debanye aha maka akwukwo ozi?
Mgbe ị mechiri atụmanya, ha mere budata ma obu debanye aha maka ọdịnaya?
Mgbe ị mechiri atụmanya, ha mere search maka gị n'ịntanetị?
Ọ bụghị na ị nwere ike ikwu na ire ere niile na mbata ahịa ha na-abata, mana na-echeghị na ọ nweghị mmetụta na ahịa ahịa bụ mmejọ na-adịghị mma. Nke a bụ ụfọdụ ọnụọgụ sitere n'aka ndị ahịa anyị na-eche:
Ihe ndekọ ndị a na-enyocha ma ọ bụ bot bot ma ọ bụ ghost bot okporo ụzọ ma nye otu afọ karịa afọ nke weebụsaịtị ha nchịkọta. N'afọ gara aga nwere ebe nrụọrụ weebụ nke na-adịghị nwayọ ma nwee ụfọdụ ihe mebiri emebi… ihe ọjọọ maka ụlọ ọrụ teknụzụ. A chọtara ha na nsonaazụ ọchụchọ 11 na mpụga aha ụlọ ọrụ nke ha, 8 n'ime ha na peeji nke 2. Ọbụna aha ụlọ ọrụ ha agwakọtara ya na ụfọdụ ụlọ ọrụ aha ha ndị ọzọ. Ugbu a, ha na-achịkwa peeji nsonaazụ ọchụchọ ahụ.
Ugbu a Google nwere profaịlụ ụlọ ọrụ zuru oke gosipụtara, profaịlụ mmekọrịta ha gosipụtara, yana nkọwa ụlọ ọrụ agbatịkwuru yana sublinks na peeji nsonaazụ ọchụchọ engine. Ha ruru 406 dị iche iche, 21 na peeji nke 1, 38 na peeji nke 2 na ndị ọzọ n'ime ha na-aga n'ihu na-enweta traction ka ha na-ewulite ikike site na nyocha ihe.
Olee Otú I Si Enyere Aka?
Inbound marketing abughi uzo iji aka ahia ahia.
Ndị ọrụ gị ọ na-akwalite ọdịnaya gị n'ịntanetị?
Are na-achọ enyemaka nke mmekọrịta ọha na eze iji kwalite atụmatụ ndị dị n'ịntanetị?
Na-akwụ ụgwọ maka nkwalite ọdịnaya n'ịntanetị?
Ndi otu ndi ahia gi na eji ọdịnaya ha eme ihe iji nyere aka mechie olile anya ha?
Ndi otu ndi ahia gi n’enye nzaghachi n’ime ihe nke ga enyere aka ma obu ihe ndi n’aaghi enyere aka?
Echere m na ụlọ ọrụ dị nnọọ akụ mgbe ha nwere ọtụtụ ndị ọrụ na ọ dịghị onye na-akwalite ọdịnaya ụlọ ọrụ nyekwara. Advocacy dị oké mkpa ka ị na-eto eto iru gị. Ọ bụrụ na m hụ enyi ma ọ bụ onye ọrụ ibe m na-akwalite azụmaahịa ha ma m nọ n'ọkwa mkpebi, aga m enyocha ihe ha ga-enye.
Inbound Marketing abughi ihe ozo. N'oge na-adịbeghị anya, anyị nwere otu atụmanya nke na-akpọsa na-enweghị weebụsaịtị webụsaịtị maka afọ 15 n'ịntanetị ma ha gwara m na kwa afọ ọnụ ahịa ọ bụla na-arị elu na ọnụego ha na-aga n'ihu na-ada. Ndị mmadụ na-ala azụ isoro ha na-azụ ahịa n'ihi na ha enweghị websaịtị. Ugbu a, ha na-ajụ anyị otu ha ga-esi wee techaa maka afọ ndị ahụ furu efu na ha etinyeghị ego. Ha kwuru na ndị asọmpi ha nwere saịtị dị mma, na-achịkwa nsonaazụ ọchụchọ ha, na-etinyekwa na mgbasa ozi mmekọrịta.
Azịza dị mkpirikpi: Ha enweghị ike ịsọ mpi ugbu a.
Mana ha nwere ike itinye ego na azụmaahịa inbound ugbu a nke ga-eweta ike, hapụ ha ka ha mechie ahịa ndị ọzọ ugbu a site na ọdịnaya nwere ikike, ma gaa n'ihu na-eme ka uche na mmata na akara ha n'ịntanetị. O doro anya, ihe ndị na-adịghị mma ga-esi na mbụ pụta, mana ka oge na-aga, ha ga-emechikwu ụzọ, were obere oge, wee chekwaa ọtụtụ ego.
Ọ bụghịzi arụmụka nke ma ọ bụ na ọ bụghị inbound marketing ọrụ. Majorlọ ọrụ ọ bụla na-etinyekwu ego na ọdịnaya ha, nyocha na usoro mmekọrịta ha na-aga n’ihu ịhụ nloghachi na itinye ego. Arụmụka bụ etu ị si gụpụta ma kwuo na nloghachi na ego ahụ.
Ọ bụrụ n’itinyela ego gị inbound marketing ma na-ahụ ndu adịghị mma ma ọ bụ ndu adịghị mma, ị na-a attentiona ntị na ozi ndị ọzọ?
Olee otú ọtụtụ atụmanya dị ịga na saịtị gị ebe obu na itinye atumatu ahia ahia gi?
Olee otú ọtụtụ atụmanya edebanye aha gi ebe obu na itinye atumatu ahia ahia gi?
Olee otú ọtụtụ atụmanya ibudata ma ọ bụ debanye aha maka ọdịnaya ebe ọ bụ na ị mejupụtara usoro inbound marketing?
Olee otú ọtụtụ atụmanya achọ maka gị n'ịntanetị ebe ị na-etinye usoro ahịa inbound gị?
Olee otú ibu gị ahịa na-emechi ebe obu na itinye atumatu ahia ahia gi?
Ogologo oge gị ire ere ebe obu na itinye atumatu ahia ahia gi?
Inbound Marketing na-enwe mmetụta ngosi na ahịa na azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ọ bụla gafee ụlọ ọrụ ọ bụla. Mana ọ naghị arụ ọrụ na agụụ, ọ na-arụ ọrụ n'akụkụ ọpụpụ gị na usoro ahịa na ahịa ndị ọzọ. Jirichaa ROI, ị ga-arara onwe ha nye na-arụ ọrụ iji hụ na ị na-ewu ọkụ na ikike gị ụlọ ọrụ. Na-eto eto ọgụgụ gị, na-eto na netwọkụ gị, na-eto ma na-esokwa mmekọrịta gị na ndị ọzọ na-eso… ihe a niile na-ewe oge na oge dị egwu.
Anaghị m ere ihe omume m na-ekwenyeghi na m na-ere sistemụ nke toro ịrịgo anyị na nnweta anyị na ụlọ ọrụ anyị maka afọ 7 ogologo. Anyị emeela otu ihe ahụ maka ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ teknụzụ. Ndị nwere ekele maka uru na mbọ dị ogologo oge na-amata nsonaazụ ha.
Industrylọ ọrụ anyị (gụnyere ụlọ ọrụ anyị) kwesịrị ịrụ ọrụ ka mma nke ịkụziri ndị ahịa ihe na ịnye ọnụ ọgụgụ niile nke na-enye na ntinye mbata bụ ntinye ego kachasị mma onye ahịa nwere ike ime na mbọ ahịa ha.
Tags: inboundinbound na-edugainbound marketingedu